ဆိုင်ရပ်စ် - ဝီကီပီးဒီးယား
ကိုဩဒိနိတ်: 06h 45m 08.9173s, −16° 42′ 58.017″
Sirius A / B
ဆိုင်ရပ်စ်၏ တည်နေရာ (စက်ဝိုင်းပြထားသည်)
ကြယ်စုတန်း ဖုသျှ နက္ခတ်တာရာ
Sirius (/ˈsɪriəs/) system
ညာဘက်တိမ်းစောင်းမှု 06° 45′ 08.91728″
နိမ့်ဆင်းမှု −16° 42′ 58.0171″
မြင်သာသောအရွယ်အစား (V) −1.46
ညာဘက်တိမ်းစောင့်မှု 06° 45′ 08.917″
နိမ့်ဆင်းမှု −16° 42′ 58.02″
မြင်သာသောအရွယ်အစား (V) −1.47
ညာဘက်တိမ်းစောင်းမှု 06° 45′ 09.0″
နိမ့်ဆင်းမှု −16° 43′ 06″
မြင်သာသောအရွယ်အစား (V) 8.44
ဗဟိုခွာအား အလျင် (Rv) −5.50 km/s
သင့်လျော် ရွေ့လျားမှု (μ) RA: −546.01 mas/yr
Dec.: −1223.07 mas/yr
ပြောင်းလဲ တည်နေရာ (π) 379.21 ± 1.58 mas
အကွာအဝေး ၈.၆0 ± ၀.၀၄ ly
(၂.၆၄ ± ၀.၀၁ pc)
ပကတိ အရွယ်အစား (MV) 1.42
ပကတိ အရွယ်အစား (MV) 11.18
အဖော် α CMa B
ပတ်လမ်းကြာချိန် (P) 50.090 ± 0.055 နှစ်
ဆီမီး-မေဂျာ ဝင်ရိုး (a) 7.50 ± 0.04"
စက်ဝိုင်းပုံပတ်လမ်း (e) 0.5923 ± 0.0019
နိမ့်ဆင်းမှု (i) 136.53 ± 0.43°
ဆုံမှတ်၏လောင်တီကျု (Ω) 44.57 ± 0.44°
အနီးဆုံးပတ်လမ်း (T) 1894.130 ± 0.015
(secondary) 147.27 ± 0.54°
α CMa A
ဒြပ်ထု 2.02 M☉
အချင်းဝက် 1.711 R☉
တောက်ပမှု 25.4 L☉
မျက်နှာပြင် ဒြပ်ဆွဲအား(log g) 4.33 cgs
သက်ရောက်သည့် အပူချိန် 9,940 K
သတ္တုကြွယ်ဝမှု [Fe/H] 0.50 dex
စတီလာ လှည့်ပတ်မှု 16 km/s
စတီလာ သက်တမ်း 225–250 Myr
α CMa B
ဒြပ်ထု 0.978 M☉
အချင်းဝက် 0.0084 ± 3% R☉
တောက်ပမှု 0.056 L☉
မျက်နှာပြင် ဒြပ်ဆွဲအား (log g) 8.57 cgs
သက်ရောက်သည့် အပူချိန် 25,200 K
Dog Star, Aschere, Canicula, Al Shira, Sothis, Alhabor, Mrgavyadha, Lubdhaka, Tenrōsei, α Canis Majoris (α CMa),9Canis Majoris (9 CMa), HD 48915, HR 2491, BD−16°1591, GJ 244, LHS 219, ADS 5423, LTT 2638, HIP 32349
Sirius B: EGGR 49, WD 0642-166, GCTP 1577.00
ဆိုင်ရပ်စ် (/ˈsɪriəs/) သည် နေပြီးလျင် ကမ္ဘာမြေ၏ကောင်းကင်ယံမှမြင်ရသော အတောက်ပဆုံး ကြယ်တစ်စင်းဖြစ်သည်။ ဆိုင်ရပ်စ်သည် ဖုသျှ နက္ခတ်တာရာတွင် တည်ရှိပြီး ကနိုးပတ်ထက် နှစ်ဆနီးပါးခန့် ပိုမိုတောက်ပသည်။ ဆိုင်ရပ်စ်ဆိုသည့် နာမည်သည် ရှေ့ဟောင်းဂရိဘာသာစကား Σείριος (Seirios) မှဆင်းသက်လာပြီး ရဲရဲတောက်နီခြင်း စသည်ဖြင့် ဆိုလိုသည်။ သာမန်မျက်လုံးဖြင့် ကြည့်လျင် ကြယ်စုံတွဲအား ကြယ်တစ်စင်းတည်းအဖြစ်သာ မြင်ရသည်။ ယင်းကြယ်စနစ်တွင် ဆိုင်ရပ်စ် အေ သည် ပင်မအစီစဉ်အတွင်းရှိကြယ် ဖြစ်ပြီး ဆိုင်ရပ်စ် ဘီ သည် မှေးမှိန်သည့် ကြယ်ဖြူပု ဖြစ်သည်။ ဆိုင်ရစ်ပ် အေ နှင့် ဆိုင်ရပ်စ် ဘီ တို့သည့် အကွာအဝေးအားဖြင့် ၈.၂ မှ ၃၁.၅ AU ရှိသည်။
ဆိုင်ရပ်စ် အေ သည် ကမ္ဘာမြေနှင့် နီးသောကြောင့် တောက်ပစွာ ပေါ်နေသည်။ Hipparcos နက္ခတ္တဂြိုဟ်တု၏ တွက်ချက်မှုအရ ယင်းကြယ်သည် အလင်းနှစ် ၈.၆ (၂.၆ pc) ကွာဝေးသောကြောင့် ဆိုင်ရပ်စ်သည် ကမ္ဘာမြေ၏ အိမ်နီးနားချင်းမိတ်ဆွေများမှ တစ်ခုအပါအဝင်ဖြစ်သည်။ ဆိုင်ရပ်စ်သည် နေစကြာဝဠာသို့ တဖြည်းဖြည်း ရွေ့လျားနေသောကြောင့် နောက်ထပ်နှစ်ပေါင်း ၆၀၀၀၀ အထိ ပိုမိုတောက်ပနေမည်ဖြစ်သည်။ ယင်းအချိန်သို့ရောက်ပြီးပါက အကွာအဝေးသည် တဖြည်းဖြည်း တိုးပွားလာပြီး ပြန်လည်မှေးမှိန်သွားမည်ဖြစ်သည်။ သို့သော် ကမ္ဘာမြေကောင်းကင်ယံတွင် ဆိုင်ရပ်စ်သည် နောင်နှစ်ပေါင်း ၂၁၀၀၀၀ ထိတိုင် အတောက်ပဆုံးကြယ်အဖြစ် တည်ရှိနေပေလိမ့်မည်။
ဆိုင်ရပ်စ် အေ သည် နေထက် နှစ်ဆရှိသည်။ နေထက် ၂၅ ဆ ပိုမိုတောက်ပသော်လည်း ရီဂျယ်ကဲ့သို့သော အခြားကြယ်များနှင့် နှိုင်းစာလျင် အနည်းငယ် တောက်ပမှု လျော့နည်းသည်။ ကြယ်စနစ်သည် သက်သမ်းအားဖြင့် ၂၀၀ မှ ၃၀၀ မီလီယံကြားတွင် ရှိသည်။ မူလအားဖြင့် ကြယ်နှစ်စင်းသည် ကြီးမားသည့်ကြယ်များဖြစ်ကြသော်လည်း ဆိုင်ရစ်ပ် ဘီသည် ဧရာမ ကြယ်နီဖြစ်လာခဲ့ပြီး လက်ရှိအခြေနေအရ နောင်နှစ်ပေါင်း ၁၂၀ မီလီယံအကြာတွင် ကြယ်ဖြူပုအဖြစ် ပြိုလဲသွားမည်ဖြစ်သည်။ ဆိုင်ရပ်စ်အား ခွေးကြယ်ဟုလည်း လူသိများကြသည်။
↑ Sirius။ Dictionary.com Unabridged (v 1.1)။ Random House, Inc။6April 2008 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ၂.၀ ၂.၁ ၂.၂ ၂.၃ ၂.၄ ၂.၅ van Leeuwen၊ F. (November 2007)၊ "Validation of the new Hipparcos reduction"၊ Astronomy and Astrophysics၊ 474 (2): 653–664၊ arXiv:0708.1752၊ Bibcode:2007A&A...474..653V၊ doi:10.1051/0004-6361:20078357
↑ ၃.၀ ၃.၁ ၃.၂ Hoffleit, D.; Warren, Jr., W. H. (1991)။ Entry for HR 2491။ Bright Star Catalogue, 5th Revised Ed. (Preliminary Version)''။ Centre de Données astronomiques de Strasbourg။ ID V/50.
↑ ၄.၀ ၄.၁ "The Tycho double star catalogue" (2002). Astronomy and Astrophysics 384: 180. doi:10.1051/0004-6361:20011822. Bibcode: 2002A&A...384..180F.
↑ ၅.၀ ၅.၁ ၅.၂ "Where are all the Sirius-like binary systems?" (2013). Monthly Notices of the Royal Astronomical Society 435 (3): 2077. doi:10.1093/mnras/stt1433. Bibcode: 2013MNRAS.435.2077H.
↑ ၆.၀ ၆.၁ "A Spectroscopic Survey and Analysis of Bright, Hydrogen-rich White Dwarfs" (2011). The Astrophysical Journal 743 (2): 138. doi:10.1088/0004-637X/743/2/138. Bibcode: 2011ApJ...743..138G.
↑ "The physical properties of normal A stars" (2005). Proceedings of the International Astronomical Union 2004 (IAUS224): 1. doi:10.1017/S1743921304004314. ISSN 1743-9213. Bibcode: 2004IAUS..224....1A.
↑ ၈.၀ ၈.၁ ၈.၂ McCook, G. P.; Sion, E. M.။ Entry for WD 0642-166။ A Catalogue of Spectroscopically Identified White Dwarfs (August 2006 version)။ Centre de Données astronomiques de Strasbourg။ ID III/235A.)
↑ "Pulkovo Compilation of Radial Velocities for 35 495 Hipparcos stars inacommon system" (2006). Astronomy Letters 32 (11): 759–771. doi:10.1134/S1063773706110065. ISSN 1063-7737. Bibcode: 2006AstL...32..759G.
↑ "Modern optical measurements" (2008). Astrophysics and Space Science Library 354: 89–117. doi:10.1007/978-1-4020-8319-8_5. ISSN 0067-0057.
↑ van den Bos, W. H. (1960). "The Orbit of Sirius". Journal des Observateurs 43: 145–151. Bibcode: 1960JO.....43..145V.
↑ ၁၂.၀ ၁၂.၁ ၁၂.၂ ၁၂.၃ ၁၂.၄ ၁၂.၅ ၁၂.၆ ၁၂.၇ ၁၂.၈ Liebert, J. (2005). "The Age and Progenitor Mass of Sirius B". The Astrophysical Journal 630 (1): L69–L72. doi:10.1086/462419. Bibcode: 2005ApJ...630L..69L.
↑ ၁၃.၀ ၁၃.၁ Adelman၊ Saul J. (July 8–13, 2004)။ "The Physical Properties of normal A stars"။ Proceedings of the International Astronomical Union။ Poprad, Slovakia: Cambridge University Press။ pp. 1–11။ Bibcode:2004IAUS..224....1A။
↑ Qiu, H. M. (2001). "The Abundance Patterns of Sirius and Vega". The Astrophysical Journal 548 (2): 953–965. doi:10.1086/319000. Bibcode: 2001ApJ...548..953Q.
↑ Royer, F. (2002). "Rotational velocities of A-type stars. I. Measurement of v sin i in the southern hemisphere". Astronomy and Astrophysics 381 (1): 105–121. doi:10.1051/0004-6361:20011422. Bibcode: 2002A&A...381..105R.
↑ ၁၆.၀ ၁၆.၁ Holberg, J. B. (1998). "Sirius B: A New, More Accurate View". The Astrophysical Journal 497 (2): 935–942. doi:10.1086/305489. Bibcode: 1998ApJ...497..935H.
↑ "Cooling times, luminosity functions and progenitor masses of degenerate dwarfs" (1976). Astronomy and Astrophysics 49: 375. Bibcode: 1976A&A....49..375S.
↑ ၁၈.၀ ၁၈.၁ Hinckley၊ Richard Allen (1899)။ Star-names and Their Meanings။ New York: G. E. Stechert။ pp. 117–25။
↑ "Zoomorphic Astrolabes and the Introduction of Arabic Star Names into Europe" (1987). Annals of the New York Academy of Sciences 500: 89–104. doi:10.1111/j.1749-6632.1987.tb37197.x. Bibcode: 1987NYASA.500...89G.
↑ Singh၊ Nagendra Kumar (2002)။ Encyclopaedia of Hinduism, A Continuing Series။ Anmol Publications PVT. LTD။ p. 794။ ISBN 81-7488-168-9။
↑ Spahn, Mark; Hadamitzky, Wolfgang; Fujie-Winter, Kimiko (1996)။ The Kanji dictionary။ Tuttle language library။ Tuttle Publishing။ p. 724။ ISBN 0-8048-2058-9။ CS1 maint: multiple names: authors list (link)
↑ Sirius A။ SIMBAD Astronomical Database။ Centre de Données astronomiques de Strasbourg။ 20 October 2007 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Sirius B။ SIMBAD Astronomical Database။ Centre de Données astronomiques de Strasbourg။ 23 October 2007 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Schaaf၊ Fred (2008)။ The Brightest Stars။ Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons။ p. 94။ ISBN 0-471-70410-5။ 2010-07-23 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Perryman၊ M. A. C.; Lindegren၊ L.; Kovalevsky၊ J.; et al. (July 1997)၊ "The Hipparcos Catalogue"၊ Astronomy and Astrophysics၊ 323: L49–L52၊ Bibcode:1997A&A...323L..49P
↑ Perryman၊ Michael (2010)၊ "The Making of History's Greatest Star Map"၊ Astronomers' Universe၊ Astronomers’ Universe၊ Heidelberg: Springer-Verlag၊ Bibcode:2010mhgs.book.....P၊ doi:10.1007/978-3-642-11602-5၊ ISBN 978-3-642-11601-8
↑ Tomkin, Jocelyn (April 1998). "Once and Future Celestial Kings". Sky and Telescope 95 (4): 59–63. Bibcode: 1998S&T....95d..59T.
ဝစ်ရှင်နရီ၊ အခမဲ့အဘိဓာန်တွင် dog days ကို ရှာဖွေကြည့်ရှုပါ။
Wikimedia Commons တွင် Sirius နှင့် ပတ်သက်သော မီဒီယာ ရှိသည်။
Astronomy Picture of the Day of Sirius B in x-ray
Discussion on Dogon issue
Barker, Tho. (1760). "Remarks on the Mutations of the Stars". Philosophical Transactions 51: 498–504. doi:10.1098/rstl.1759.0049.
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ဆိုင်ရပ်စ်&oldid=721417" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၂၀ နိုဝင်ဘာ ၂၀၂၁၊ ၀၇:၁၉ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။